Ungayitshintsha njani ifonti kwiHuawei yakho kunye nembeko yefowuni | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Yenza ngokwezifiso i-Android
Ukuba unayo i-smartphone ye-Huawei okanye eyi-Honor, ifowuni iza nefonti emiselweyo. Ukuba bayafuna, abasebenzisi banethuba lokuhlengahlengisa ubungakanani befonti nangaliphi na ixesha, into efezekiseka lula. Nangona kunokubakho abantu abathi ufuna ukutshintsha ifonti leyo iza emnxebeni, kuba ayisoloko ithandwa ngumntu wonke. Ngale ndlela, ukhetho lukhawulelwe.
Kuba into eqhelekileyo kukuba iifowuni azizisi le nto ngokwasekhaya. Ngelixa labasebenzisi abane-smartphone yeHuawei Kukho iindlela zokutshintsha ifonti ngaphandle kwengxaki ezininzi. Kule meko kuya kufuneka usebenzise isicelo. Enkosi ngayo, iifonti ezintsha zaziswa kwifowuni.
IHuawei ngokwembali ibiyenye yeefayile ze- Amanqaku kwi-Android eguquguqukayo ngakumbi kubasebenzisi, xa besenza utshintsho kwiifowuni zabo. Ngelixa bekukho iinguqu kulo mba, kuyabonakala ukuba iseyinyani. Ke ngoko, kusenokwenzeka ukusebenzisa usetyenziso onokutshintsha ifonti kwifowuni ngaphandle kwengxaki ezininzi. Indlela elungileyo yokwenza i-smartphone yakho ibe yeyakho ngakumbi.
Ngale ndlela, ukusetyenziswa kuya kwenziwa usetyenziso olubizwa ngokuba nguMhleli woMxholo we-EMUI. Inikezelwe ekwaziseni imixholo kwifowuni, kodwa ikwasinika amandla okutshintsha ifonti ngaphandle kokwenza nantoni na ekhethekileyo. Ke ithiwe thaca njengenye indlela yabasebenzisi yokutshintsha ifonti ngaphandle kokuba neengcambu ifowuni.
1 Umhleli woMxholo we-EMUI
2 Faka iifonti kwiHuawei
Umhleli woMxholo we-EMUI
Yisicelo esinakho khuphela simahla kwifowuni yethu yeHuawei. Enkosi ngayo, unokufikelela kwinani elikhulu lezihloko, kodwa kunye nemithombo. Ukuze abasebenzisi babe nakho ukwenza ngokwezifiso ukubonakala kwe-smartphone yabo ngawo onke amaxesha ngendlela elula ukuba bakubona kufanelekile. Ke ithiwe thaca njengenketho elungileyo yokuqwalaselwa.
Into yokuqala ekufuneka yenziwe kukukhuphela usetyenziso kwifowuni. Iyafumaneka kwiVenkile yokuDlala, apho inokukhutshelwa simahla ngaphandle kwengxaki ezininzi. Kuyenzeka ukuba uyenze kule khonkco ilandelayo, njengoko besitshilo, iyahambelana neHuawei neNtlonipho.
Faka iifonti kwiHuawei
Xa uMhleli woMxholo we-EMUI efakwe kwifowuni yeHuawei ebuzwayo, iyavula. Ke, kuya kufuneka uye kwicandelo lemithombo, yenye yeetabhu kwisicelo. Kweli candelo kukho uluhlu olunayo yonke imithombo ekhoyo, ukuze umsebenzisi ngamnye abe nakho ukukhetha leyo ayibona ifanelekile ngalo naliphi na ixesha kwimeko yabo. Xa uyifumene, ngenisa umthombo kwaye kukhetho lwayo kukho icandelo eliza kwenza ukuba.
Okulandelayo, kuthiwa kufuneka ufake usetyenziso, ekuvumela ukuba ulungise ukufakwa kweefonti kwifowuni. Kuya kufuneka wamkele kwaye ulinde ukukhutshelwa kugqitywe. Xa igqityiwe, vula le app kwaye ucofe kwiqhosha le-ON. Ke, sibuyela kuMhleli woMxholo we-EMUI, iphi ifonti esifuna ukuyifaka kwifowuni. Emva koko sayikhuphela emva koko saya kwimixholo yeapp kwifowuni, eyinzalelwane yeefowuni zikaHuawei.
Ngaphakathi kufuneka cofa ngokwezifiso kwaye ukhethe ukhetho lwamagama apho, apho sinokukhetha khona ifonti esiyikhupheleyo ngalo mzuzu. Kufuneka siyinike nje ngelo xesha, ukuze lo mthombo uqale ukusetyenziswa kwi-smartphone ye-Huawei ekuthethwa ngayo. Ayisiyonkqubo enzima, nangona kunamanyathelo ambalwa okuphumeza. Kodwa kwabo basebenzisi abafuna ukutshintsha ifonti, lolona khetho lufanelekileyo. Isebenza kakuhle kwaye sinenombolo enkulu yeefonti ezikhoyo kwifowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungayitshintsha njani ifonti kwi-smartphone yeHuawei